Cabdulkadir Cali Sheekh ( Sanka ) - Safari Phone
Cabdulkadir Cali Sheekh ( Sanka )
C/qaadir sanka ayey dadka reer Muqdisho ku tilmaameen xilligan heesaaga loogu jecel yahay xafladaha, aroosyada iyo bandhig faneedyada lagu qabto Hotelada waaweyn ee Muqdisho, wuxuuna C/qaadir sanka uu sheegay in qiimeyntaasi uu ka kasbaday shacabka ay tahay mid uu ku xajistay mihnadiisa fanla oo uusan ku dheelin isaga oo xusay in uu mar kasta qiimeeyo kooxdiisii fanka ee Iftin walina mgacaasi uu ku daadihiyo dhinaca fanka wuxuuna sheegay fannaanka Muqtaar Ramadaan Iidi oo degan degmada Waaberi soona maray kooxdii Durdur ee xilligaan ay iskala tirsan yihiin kooxda fanka ee Iftin.
C/qaadir sanka oo ku luqeeya heeso dabacsan oo fara badan iyo kuwo wadani ah ayaa ahaa mid ka mid ah heesaayaashii ugu cad cadaa kooxdii Iftin waxaana garbihiisa buuxin jiray heesaayaashii ay ka midka ahaayeen Bashiir Cali Xuseen, Khaliif Cismaan Cabdi (Sayid khaliifa), Maryan Cali Muudeey, Max�ed Cabdi Sh. Carab, Farxiyo Cali Sheekh, Caddey Cali Axmed iyo Luul Cabdi Sheekh oo hadda ka joogta heesaayaashaasi kooxdii Iftin ee ay C/qaadir sanka isla soo qaateen waayihii Iftin xilligii bariisamaadkii.
C/qaadir sanka riwaayadaha uu ka qeybgalay waa kuwo aad u fara badan oo aan lagu soo koobi karin waxaase laga xusi karaa Amakaag jaceyl, labo dhaqan kala dheer iyo kuwo kale.
�Caddey Cali Axmed, Farxiyo Cali Sheekh iyo Luul Cabdi Sheekh ayaa ka mid ahaa gabdhihii Iftin ee heesaha dabacsan aan wada darandoorin jirnay� ayuu yiri C/qaadir Sheekh Cali Sanka oo ku tilmaamay gabdhahaasi kuwo cod macaanaa oo soo maray kooxdii Iftin.
Fannaanku shirkii Carta ee la qabtay sanadkii 2000 wuxuu ka mid ahaa heesaayaashii ugu caansanaa ee isugu tegay halkaasi isaga oo heestii caan baxday ee magaceedu ahaa �Safar baa la tegayaa� ka qaaday shirweynihii Carta ee ka dhacay dalka Jabuuti iyo heeso kale oo uu la qaadayey fannaaniintii ka qeyb gashay shirkaasi.